Tag: xeerarka kulamada | Martech Zone
Tag: xeerarka kulamada
Dadka qaarkiis waxay xoqaan madaxa marka aan ka soo daaho kulanka ama sababta aan u diido kulamadooda. Waxay u maleynayaan inay tahay edeb daro inaan soo daaho late ama aanan soo wada muuqan. Waxa aysan waligood aqoonsan waa inaanan ka daahin kulan istaahila. Waxaan u maleynayaa inay tahay edeb daro inay iyagu qabteen kulanka ama markii horeba igu marti qaadeen. Kulamada mudnaanta leh ayaa la wacdaa marka loo baahdo Kulamada mudnaanta leh looma qorsheynin inay baxaan